Faragalinta Itoobiya oo gaartay inay ku xigaynka Gudoonka Baarlamanka Soomaaliya umagacaawdaan Ninkii Soomaaliya galin lahaa Gumaysi!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Faragalinta Itoobiya oo gaartay inay ku xigaynka Gudoonka Baarlamanka Soomaaliya umagacaawdaan Ninkii Soomaaliya galin lahaa Gumaysi!!
Faragalinta Itoobiya oo gaartay inay ku xigaynka Gudoonka Baarlamanka Soomaaliya umagacaawdaan Ninkii Soomaaliya galin lahaa Gumaysi!!
Faarax Sheekh C/qaadir oo ka mid ah Musharaxiinta loolanka adag ugu jira Guddoonka Baarlamaanka ayaa la sheegayaa inuu ugu cad cad yahay xilka Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Musharaxiinta u taagan xilka Guddoomiye kuxigeenka 1aad ayaa gaaraya Lix Musharax oo ay ku jirto Khadiijo Maxamed Diiriye, waxaana tartanka loo geli doono xilkan u yahay mid adag.
Doorashada ayaa lagu wadaa inay dhacdo 12 bishan, waxaana isha lagu hayaa musharaxiinta ku loolamaya xilkan oo ku guda jira dadaalo iyo olole aad u xoogan.
Faarax Sheekh waxaa uu siyaasadda ku soo biiray 2012-kii, xilligaasoo uu noqday xubin baarlamaan, kadibna xilal kala duwan ka soo qabtay Xukuumadihii u dambeeyay waana Ninkii Gen. Gabre Madaxtooyada Soomaaliya Xafiis Qarsoodiya Uga sameeyay.
Ka hor inta aanu syaasadda soo galin, Faarax waxa uu ka soo shaqeeyay hay’adihii sama falka ee dalka ka soo howlgalay, kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya Ninkaan ayaa wuxuu dhabarjibin jiray Beeralayda Soomaaliyeed waxay soo saartaan ayuu kujibin jiray Raashin Mucaawano loogu tala galay Dadkii lagu sheegaayay Qaxxooti ee Soomaaliya Kunool.
Waxaa uu madax ka ahaa Wakaalada Muslimiinta Afrika oo Soomaaliya ka hirgalisay xarumo lagu xanaaneeyo da’yarta agoonta ah, iskuulo iyo Xarumo quudin oo Magac uyeel ah.
Waxaa uu ka mid ahaa aas aasayaasha Machadkii SIMAD oo markii dambe Jaamacad loo bedelay waxaana Bara ka ahaay Asaga Iyo Xasan.
Faarax waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay shaqsi af gaaban, oo halis badan, dadka dhageysta, waxaana tusaale loogu soo qaataa kaalintiisa kahor taga Mawashinka Xasan xilka Madaxweyne looga toori rabay iyo dhiira gelinta siyaasada danaha Itoobiya ee soomaliya ka leedahay.
Dadka qaar ayaa aaminsan inuu Faarax yahay shakhsi leh aragti ´halis oo siyaasadeed, isla markaana leh sifaadka lagu yaqaano Musiibada.
Previous PostDaawo: Sadex dhalinyaro ah iyo Mooto Qaraxyo Lagu soo Xidhay oo la Qabtay MUUQAL!! Next PostDAAWO MUUQAAL: Macnaha calaamadan ku Taalla Badeecadaha badankooda !!